Nhau - Chii Chaunoziva nezve Mineral Fiber Board?
Chii Chaunoziva NezveMaminerari Fiber Board?
Iyo mineral furawa bhodhi ichave yakarongedzwa mune akasiyana maitiro panguva yekugadzira, iyo iri nyore kushandiswa munzvimbo dzakasiyana. Iyo yakajairika pamusoro peye mineral wool board ine makungu emakungu, makomba makuru uye madiki, akakwirira-density pinholes, jecha kuputika uye kurapa kwefirimu. Isu tinogonawo kugadzira humhizha hunyanzvi pamusorosoro, senge pamusoro pevhu girosari bhodhi, cheki, bhodhi yakafararira, nezvimwewo. Iyo bhodhi inotora zvinonzwika haina zvinhu zvinokuvadza kumuviri wemunhu, uye chimiro chayo chikuru chinogona kutora magasi anokuvadza mune kumhepo uye kusunungura mamorekuru emvura, saka inogona kuchenesa mweya uye kugadzirisa mukati memukati mweya unyoro.
Iyo yakasimba yekuratidzira kukwanisa kwemaminerari makushe kunogona kunyatso kugadzirisa mukati memukati, kuchengetedza maziso uye kubvisa kupera simba Kukwirira kwepamusoro kunogona kudzora zvisina mwero mutengo wekushandiswa kwesimba, kusvika pagumi neshanu 25% emaminerari emvere dzemafuta zvakanyatsonaka kupisa, kusimbisa mashandiro emagetsi kunogona kuwedzera kudzikisa kwekutonhora nekudziya mitengo, kusvika pa30% 45% mutengo. Iyo mikuru mikuru midziyo yemaminerari ewaini inogadzirisa bhodhi inodziya ndeyemafuta akasimba-emaminerari, ine density pakati pe200 - 300Kg / m3, saka ine hupfumi kuburikidza nemacropores, ayo anogona kunyatso bata mafungu einzwi uye kuderedza kutaridzika kwefafitera. kuvandudza inzwi remukati nekuderedza ruzha.
Kuti uise bhodhi yemvere dzemaminerari, nzira dzakasiyana dzinofanirwa kuitwa pamakona ebhodhi kuti dzienzane neyakagadziriswa ceiling system. Naizvozvo, mheto dzinogona kuve dzakakomberedzwa, dzakatenderedzwa, dzakasungirirwa pamucheto, dzakavanzika muganho kana kuti mupendero wechikepe.
Ukobvu hunogona zvakare kuve 14mm kusvika 20mm zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana. Zvinowanzo kujairika 595x595mm, 600 × 600mm, 603x603mm, 605x605mm, 625x625mm, 595x1195mm, 600 × 1200mm, 603x1212mm, nezvimwe.
Munguva yekuvakwa kweineral mineral board, kamuri inofanirwa kuvharwa kudzivirira kupinda kwemhepo nyoro kuitira kuti inokonzeresa mineral furodhi board kunyura;
Panguva yekugadzwa kwekuisa, vashandi vanofanirwa kupfeka magurovhosi akachena kuchengetedza bhodhi kumusoro kwakachena.
Mineral machira bhodhi ine yakanakisa zviitiko zvakaita sekumisikidza kunyudza, kusapindirana, kupisa kupisa, kushongedza kwakanaka, nezvimwe. Inoshandiswa zvakanyanya kwakasiyana siyana mukuvakwa kwedenga uye pamadziro-akaiswa mukati mekashongedzo; senge mahotera, maresitorendi, dzimba dzemitambo, dzimba dzekushambadzira, nzvimbo dzehofisi, studio, studio, makamuri emakomputa uye zvivakwa zveindasitiri.
Nguva yekutumira: Jul-13-2020